Fanadio ny lisitry ny adiresy mailaka: Maninona ianao no mila hadio mailaka ary ahoana no hisafidianana serivisy
Zoma, Martsa 5, 2021 Talata, Aprily 27, 2021 Douglas Karr
Fanatanjahantena ra ny marketing amin'ny mailaka. Tao anatin'izay 20 taona lasa izay, ny hany zavatra novaina tamin'ny mailaka dia ireo mpandefa mailaka tsara dia manohy voasazy hatrany amin'ireo mpanome tolotra mailaka. Na dia afaka mandrindra tanteraka aza ny ISP sy ny ESP raha te hanao izy ireo dia tsy manao izany fotsiny. Ny valiny dia misy ny fifandraisan'ny roa tonta. Manakana ny Mpanome Serivisy Email (ESP) ny Mpanome Tolotra Aterineto (ISP)… ary terena hanakana ny ESP
Salesmachine: mampitombo ny fiovam-po amin'ny fanandramana SaaS sy ny fananganana mpanjifa
Alarobia, Septambra 23, 2020 Alarobia, Septambra 23, 2020 Douglas Karr
Raha mivarotra lozisialy ho vokatra serivisy (SaaS) ianao, ny fidiram-bolanao dia miankina amin'ny fampiasana ny data sy ny fampiasana ny mpanjifa eo amin'ny sehatry ny fifandraisana sy ny kaonty. Salesmachine dia manome hery ireo ekipa mpivarotra sy fahombiazana miaraka amina fomba fijery azo ampiharina sy mandeha ho azy hampitombo ny fiovam-po sy ny fananganana mpanjifa. Salesmachine dia manana tombony roa voalohany amin'ny fampiroboroboana ny fiovam-pisedrana - Fanapahana isa azo ekena mifototra amin'ny fahaizan'ny mpanjifa sy ny fandraisana ny vokatra. Ny mari-pahaizana amin'ny fisedrana Salesmachine dia mamela ny ekipanao varotra hifantoka amin'ny olona ambony
Databox: Araho ny fahombiazanao sy hahitanao ny fahitana amin'ny fotoana tena izy
Zoma, Aogositra 10, 2018 Friday, May 21, 2021 Douglas Karr
Databox dia vahaolana amin'ny dashboarding izay ahafahanao misafidy fampidirana efa am-polony na hampiasa ny API sy ny SDK azy ireo hanangonana tahirin-kevitra amin'ny loharanom-baovao rehetra. Ny Databox Designer azy ireo dia tsy mitaky kaody, miaraka amina drag sy drop, fanamboarana ary fifandraisana tsotra. Ampidiro ny endri-javatra Databox: Fanairana - Mametraha fanairana ho an'ny fandrosoana amin'ny metrika manan-danja amin'ny alàlan'ny tsindry, mailaka na Slack. Modely: efa vonona ny template maodely Databox